NNPC AWỤCHIELA STEETI BENUE MAKA ỊCHỌ MMANỤ – hoo!haa!!
Ndi ụlọ ọrụ okwu mmanụ ala anyị di n’aka bụ Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, n’aha nkenke, ngalaba na-eme nchọpụta ebe mmanụ dị, awuchiela na steeti Benue maka ọrụ ichọ mmanụ n’ikpere mmiri benue. Ana-atụ anya na ndia ga-enweta ụzọ bụ ọkacha ha ga-eji bagide ọrụ ịchọ mmanụ na steeti Benue.
Mgbe ọ na-anabata ndi otu ọrụa ụnyahụ ka onye nọrọ aka na-achị steeti ahụ n’oche ọrụ bụ Njinia Benson Abounu gosiputara obi añụrị ya ka ndi NNPC siri bia maka ichọ mmanụ na steeti Benue ka ha piachisịrị ọrụ ha rụrụ na steeti Nasarawa. O kwere ndi otu ọrụa nkwa inye ha ebe nakwa ọnọdụ ga-enyere ha aka ịrụ ọrụ ha na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọbụ onye isi ụlọ ọrụ NNPC na-ahụ maka ọrụ ana-elegara anya n’ihu bụ Dọkinta Mazadu Bako nọ n’isi otu ọrụa.
Njinia Abounu sịrị na-agbanyeghị nsogbu ndi nchị ehi na-enye na steeti Benue, na ha agaghị ekwe ka ihe ọbụla bụrụ ọdachị nye ọrụ ha na steeti ahụ. Ọ gara n’ihu kwue na ewubela kọmitii ga-ahụ na nchekwa na udo dị mgbe ndia na-arụ ọrụ ha. Ọbụ onye ode akwụkwọ gọmenti steeti Benue bụ onye isi kọmitiia.
Previous Post: KEDU KA ANYỊ GA-ESI HAPỤ ISI GWỤỌRỌ OTULE AJỤ?
Next Post: ỊKWỤSỊ INA NDI MMADỤ ỤGWỌ ỌKỤ N’ỤDỊ ECHERE N’ỌBỤ GA-EBUTE NSOGBU